Ahoana no hividianana rindran-damina tsy dia atahorana ho voasazy noho ny Google?
Ny fitaovam-pikarohana lehibe toy ny Google dia fantatra amin'ny fampiasana ny isam-baomin'ny orinasa na ny blaogy rehetra sy ny toerana misy azy, raha jerena ny lahatsoratr'izy ireo izay manondro azy ireo. Ireo rantsana organika dia mahazo tombony amin'ity dingana ity. Saingy raha nanapa-kevitra ny handroso haingana ianao, tokony ho fantatrao ny fomba hividianana rindran-kaonty ary hisoroka ny sazin'i Google amin'ny fotoana iray ihany.
Ary misy backlinks sasantsasany izay tsy maintsy alaina amin'ny toe-javatra rehetra, indrindra ireo avy amin'ny tambajotra iombonana. Raha tsy izany dia hitodika azy ireo i Google ary hampiato ny lisitra misy anao. Koa, ahoana no hividianana rindran-damina nefa tsy tratra? Manoro hevitra ny hanao izay tsara indrindra vitanao aho mba hibaiko farafaharatsiny avy amin'ireo karazana backlinks telo ireo. Tsy vitan'ny tsy mahomby amin'izao fotoana izao izy ireo, fa nanjary fomba tsotra mba hahazoana sazy miharo. Ity ambany ity ny tokony hatao amin'ny vidiny rehetra.
Fanatanjahantena vaovao momba ny tranonkala spammy sy ny fanamarinana ambany pejy. Midika amiko fa ny tranokalanao na ny blôginao dia tsy tokony hanisy votoaty dika mitovy. Raha tsy izany, ny fanaovana ny ataonao an-tserasera dia mety hanana sary mahantra amin'ny fomba fijerin'ny milina fikarohana. Noho izany, mialà amin'ireo lahatahiry spammy izay mamoaka lahatsoratra marevaka mba hanolorana backlinks DoFollow ho setrin'izany.
Tokony hosorohana ihany koa ny fampivoarana tetik'ady famerenam-bidy goavana. Mazava ho azy, ny ampahany amin'ireto rohy ireto dia mety tsara ho an'ny tranokalanao na blôginao. Na dia izany aza, ny zava-drehetra dia azo inoana kokoa ny mamarana ny sazy mihatra aminao. Ny zava-misy dia raha toa ka mamolavola ny rohim-pifamoivoizana ianao, ny bilaogy spammy, ny mailaka maimaim-poana, na ny karazam-pifaneraserana misy ifandraisany - dia manangona sainam-pirenena mena ho an'ny Google ianao rehefa avy eo.
Ny rohy nomena amin'ny PR avo dia tokony ampiasaina amin'ny fikarakarana manokana. Rehefa mifandray amin'ny rohy DoFollow ianao (na mivarotra na mividy azy ireo), dia ataovy izay tsy hametrahana sarin-dian-tongotra. Midika izany fa ny rindran-kaonty voarainao rehetra dia atolotra ho marika amin'ny tag "nofollow". Raha tsy izany, ny milina fikarohana dia mahita azy ireo ho toy ny fehezan-dalàna manipulative izay mihatra amin'ny sazy mihatra.
Ahoana no hividianana bakolazo? Alohan'ny zavatra hafa, avelao hiatrika izany - ny kalitaon'ny kalitaon'ny kalitaona dia tsy tonga amin'ny vidiny mora. Ohatrinona ny vidin'izany? Eny, miankina izany. Andeha hojerentsika ohatra sasantsasany ho anao mba hahitana fara fahakeliny ny fahitanao akaiky amin'ny toerana misy anao sy ny fomba hividianana rindran-damina tsy dia atahorana firy ny fanamelohana an'i Google:
Authority directories dia ho tonga vahaolana tanteraka amin'ny fividianana rindran-damina. Tsotra ny zava-drehetra - tokony handefa ny blôginao na ny tranonkalanao fotsiny ianao, ary koa ny saram-pandehanana mahazatra isaky ny famerenana.
Milaza ny olona fa loharano PR1 sy PR2 afaka manolotra hividianana rindry ho an'ny 25-30 dolara ka hatramin'ny 100 dolara na mihoatra. Mazava ho azy fa tokony ho kalitao sy hoatr'izany ireo ravinkazo ireo. Ny fividianana azy ireo anefa, dia ataovy izay hahazoana antoka fa tsy mivarotra ampahibemaso ny tranonkala mpanome tolotra, satria mety ho mora amin'ny Google ny mamantatra izany.
Ny vohikala manam-pahefana ambony dia afaka ho tonga vahaolana azo ekena amin'ny fividianana rindran-bola ho an'ny fandoavam-bola isam-bolana. Amin'izany fomba izany, ataovy azo antoka fa miresaka momba ny loharano azo antoka ianao - aza misalasala manao fanaraha-maso indroa, satria maro loatra ny tranonkala nopihina sy nilalao.
Anisan'ny safidy tsara indrindra azonao atao ny mividy rindran-kira avy amin'ireo mpitoraka bilaogy hafa ao amin'ny fononteny. Eny, mangataka ampaham-bola be izy ireo Source . Raha ny zava-drehetra, resaka momba ny raharahambarotra izany, sa tsy izany?